Oge ikpeazụ gara ileta Victoria Falls tupu ọ kpoo?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Oge ikpeazụ gara ileta Victoria Falls tupu ọ kpoo?
Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • News • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche • Akụkọ kacha ọhụrụ na Zambia • Akụkọ kacha ọhụrụ na Zimbabwe
Ndị na-ahụ maka njem na Zimbabwe, ndị gụnyere ndị isi nke Ministry of Environment, Climate, Tourism and Hospitality Industry, Zimbabwe Tourism Authority (ZTA), Zimbabwe National Parks na Wildlife Management Authority, Tourism Business Council nke Zimbabwe, ndị ọbịa, ndị njem, ndị njem. ndị na-enye ọrụ, Victoria Falls Municipality, Ngalaba gọọmentị na ndị egwuregwu ndị ọzọ, gara oke ọhịa mmiri ụnyaahụ iji chọpụta ọnọdụ na-eso akụkọ mgbasa ozi banyere Victoria Falls na-akpọnwụ ma tinye ihe egwu nye ụlọ ọrụ njem na njem dị mkpa na Zimbabwe na Zambia.
Ndị ahụ metụtara ya, na-aga n'okpuru ọkọlọtọ "Team Tourism", buru ụzọ nwee ogbako na Robins Camp na Hwange National Park site na Fraịde ruo ụnyaahụ ebe ha kpebiri ịbịpụta usoro nkwukọrịta ọgba aghara nke iwu ya ga-eme mmelite mgbe niile na steeti nke omume na ụlọ ọrụ iji gbochie mgbasa ozi na-adịghị mma.
N'ime izu gara aga, onyonyo na vidiyo nke Victoria Falls na-aga n'ihu na netwọkụ mgbasa ozi mmekọrịta na nke ụwa.
Onye isi na-ahụ maka njem nlegharị anya na Zimbabwe bụ Grantmore Chidzidzi kwuru na mmiri a na-ahụ n'oge ya.
“Ọmarịcha Victoria Falls bụ nnukwu nsụda mmiri ma bụrụ nnukwu akara anyị. Dị ka ị pụrụ ịhụ, ọ bụ ihe ịtụnanya dị ka mgbe ọ bụla oke mmiri na-ada na ya dị ịtụnanya n'ezie, ”ka o kwuru.
Otu ihe ndi mmadu kwesiri imata banyere mmiri a nke sitere n’onu mmiri bu na o na-adi n’oge dika osimiri ndi ozo ma ugbua, anyi enwegola ogo mmiri.
“Anyị na-akwado onye ọ bụla ga-achọ ịhụ Victoria Falls ka ọ gaa na ebe nkiri ahụ ihe karịrị otu oge na n’oge dị iche iche. Ka ọ dị ugbu a, enweghi mmetụta na njem na ndị mmadụ na-abịa dị ka ha si eme. ”
Onye otu ụlọ ọrụ ZTA Maazị Blessing Munyenyiwa kwuru na ọ nweghị nchọpụta a maara na-egosi na Falls ga-akpọnwụ na ndụ a.
N’afọ a, a na-eme atụmatụ ịgba emume na Mapopoma maka Falls Victoria.
Cuthbert Ncube, Onye isi oche nke Ndị njem nlegharị anya nke Africa rịọrọ ndị na-eme atụmatụ nleta n'Africa: “Ee, biko gaa na Victoria Falls dịka nke a bụ ohere ikpeazụ gị, mana biko na-alaghachite ugboro ugboro - ọ ga-adịrị gị n 'ịdị ukwuu ya.